Yintoni anokukwazi ukuyidla ngexesha lokutya?
Ngukuphi ukutya okungekho na ukudliwa ngexesha lokutya?
Indoda, kunye nomfazi ngokukodwa, uhlala efuna ukubukeka enhle. Kubaluleke kakhulu ukuba athabathe ukubukeka kwakhe kwamehlo, ukuphulaphula ukuncoma, ukwazi ukuba akanakunyaniseki. Ngoko baya kwiiyiphi iinqhinga zokukhangela ezikhangayo.
Ukususela ekusebenziseni okunyanzelekayo, okwenyukayo kwaye akusiyo yonke imveliso yokuzongamela, izongezelelo zokutya, amabhande okumangalisa ngokukrakra kwiiplastiki ezinkulu. Yaye yintoni uhlobo lwesidlo samabhinqa abayithobeliyo. Le mono-yokutya, ukunciphisa ukutya kwimiba emibini, kunye neprotheni, kunye ne-carbohydrate, kunye nokutya kweqela legazi. Abasetyhini bayazi umxholo wekhalori wezinto ezininzi zokutya kwiifriji zabo, ngaphandle kwexabiso le-caloric yale nja ebeyidle kule zidlo. Mayelana neenzuzo kunye nokulimaza kuthi kaninzi kwaye ngokuthe rhoqo kuthiwa izondlo, i-gastroenterologists kumaphephandaba. Kodwa yonke ibilisa into enye: ukuze ulahlekelwe isisindo, udinga ukutya kunye nomsebenzi wokwenyama.
Ngokuzivocavoca umzimba kuyacaca, ziyimfuneko, ukugcina umzimba ngetoni. Ngoko ukuba xa ulahlekelwa bunzima, ulusu aluhlali lujikeleze iifolda, kodwa luba lukhulu kwaye luhle. Ukuzilolonga kwe-Aerobic kunceda ukunciphisa umgca we-fat, kunye nokusebenzisa ubunzima kubonelela umfazi omhle. Kuthiwani ngokutya?
Into onokuyidla ngexesha lokutya
Okokuqala kufuneka ufumane ukuba lithetha ukuthini leli gama. Ngokutsho kwesichazizwi SI. Ozhegova, ukutya kukutya okhethekileyo. Indlela yamandla! Yaye kungekhona isiteleka esilambayo okanye esweba isonka seentsuku ezintathu. Kufuneka udle, kodwa akusikho konke ukutya okunokusetyenziswa. Masiqonde ukuba yiyiphi imveliso onokuyidla ngexesha lokutya, kwaye nayiphi na imeko awukwazi.
Ukusetyenziswa ngokweqile kweswekile kunye netyuwa akuvumelekanga ngexesha lokutya. Ityuwa ayikho into ebizwa ngokuba ngumntu omhlophe ukufa. Ukuyisebenzisa ngaphezu kwesiqhelo, ngoko uqokelela kwi-slag yomzimba kunye neengxube. Ushukela kunye nayo yonke imveliso equlethe, njengamajamu, i-confectionery kunye nemveliso yokubhaka, i-jam, i-ayisikrimu, njl. Ukuxutywa ngama-proteins okanye isitashi, ishukela kubangela ukuvumba, kwaye kunye neziqhamo ziyakwenza igazi liphumelele.
Ungabandakanyi kokutya okudinga iimveliso ezigqityiweyo kunye nokutya okusemathinini. Izilondolozo, idayi kunye nezinye izithako ezibandakanya ukubunjwa kwazo ezikwinkqubo yokwandisa impilo yeshelufle yomkhiqizo womeleza kwaye ihlambe umzimba.
Ukutya okutshaya kunobungozi kwinkqubo yokutya. Kuveliso lwee-sausages kunye nemveliso sebenzisa i-fat intla, i-lerd, isikhumba, i-soy, iqulunqa konke oku kunye namaqabunga kunye nokulungiswa kwintliziyo. Amafutha aqulethwe kwezi zidlo ziqulethe i-cholesterol, ezitya iinqanawa zokuvala, zandisa ingozi yezifo zentliziyo.
Ukutya: into onokuyidla kunye noko ungenako
IMayonnaise. Ukulungelelene ekhaya, iqulethe ixabiso elininzi leoli, kunye nemveliso, zonke izilwanyana ezizinzileyo, abaxhasi kunye nezithintelo. I-margarine, izilwanyana kunye namafutha afanelekileyo kuya kuba nefuthe elibi kwiinqanawa.
Abo bangabakhathaleli nje ngomfanekiso wabo, kodwa nangokumalunga nokugcina impilo yabo, mabafunde ukufunda iilebula zeemveliso. Emva koko, ilebula yeempahla ibaluleke kakhulu njengomntu ipasipoti yakhe. Iimfakelo ezenza iimveliso azikwazi ukulimaza kuphela, kodwa zengozi kumzimba kwaye zingabangela ukuphendula okungalindelekanga.
E102, E104, E110, E122, E123, E128, i-E155 - ukukhwehlela, isifo se-asthma, ukusabela okuthe tye kunye nokuphefumula
Е200, Е216-219, Е321 - i-skin irritants, ekhokelela ekugubungeni, kubomvu kwesikhumba, izifo zesikhumba
Е223, Е220, У221-Е228, Е252, Е420-Е421, Е627 - izifo zesisu, isicatshulwa senkqubo yokutya
E621 - intloko
E173 - isifo sesifo.
Yintoni ehlala isondlo kulabo abafuna ukunciphisa umzimba okanye bazama ukutya ngokufanelekileyo? Imifuno, iziqhamo, okusanhlamvu, ioli yeoli, isinkwa sonke seengqolowa. Yaye njengemveliso yobisi obomuncu, ukutya kwezilwanyana zasemanzini, inyama ephantsi kunye neentlanzi.
Imifuno kunye neziqhamo ezinomxholo ophantsi we-caloric zizityebi kwiivithamini, ezimbiwa kunye nezinto ezilandeleleneyo, ezixhamle umzimba. I-Fiber, equlethwe kuyo, inegalelo eluncedo kwinkqubo yokugaya ukutya, isebenza njengoluhlobo lwe-scrub. Izityalo ziwusizo kuwo wonke umntu, kodwa eziluncedo kakhulu zi-buckwheat, ilayisi, i-millet kunye neekolweni zengqolowa.
Ioli e-Olive yokunyanzelwa kwebanda ibinayo yonke into encedo. Iqulethe onke amavithamini kunye nokulandelelanisa izinto eziyimfuneko kumntu, uhluthwa kakuhle ngumzimba womntu, ukhusela ukuphuhliswa kwesifo senhliziyo, imithwalo yegazi, i-atherosclerosis, inceda ekwenzeni unyango lwezilwanyana, kuqinisa izicubu zethambo kwaye kukhuthaza ukupheliswa kwe-cholesterol.
I-Cottage cheese yenye yezona zinto zisebenzise kakhulu zobisi. Izinto ezincinci ekubunjweni kwayo, zenze igalelo ekubunzeni nasekuqiniseni amathambo. Ama-amino acids avimbela izifo zesibindi, ii-vithamini ze-B ziqinisa inkqubo ye-nervous and protects against atherosclerosis.
Ngoku ke makhe sithethe malunga naluhlobo luni lwamanzi omele ulutye ekudleni. Amanzi acocekileyo asusa i-toxins kunye ne-toxins emzimbeni. Iindiza ezifudumele ngokutsha ziyanqothula ukoma, ziqulethe ezininzi iivithamini kunye nezondlo, zinegalelo ekuqiniseni ukukhuselwa komzimba, ziyakulungelelanisa amajoyina kunye netoni yomzimba ngokubanzi. Kodwa amajelo avela kumaphakheji, iilmonades ezahlukahlukeneyo kunye ne-soda, kunye neetayiti ze-diuretic kunye ne-laxative kufuneka zifakwe ngaphandle. Utywala nalo luvumelekile. Utywala ngokwawo alukho eekhalori eziphezulu, ngaphandle kwalabo batywala kunye neenkotshana, kwandisa kakhulu ukutya, kwaye wonke umntu uyazi malunga nemiphumo emibi emzimbeni.
Ukongeza kwiimveliso ngokwabo, indlela yokulungiselela ibenza ukuba bangabikho ngokutya. Ngokomzekelo, iifatata zinomxholo ophantsi wekhalori, kodwa inzulu-ebisiweyo, i-calori ephezulu. Nika okukhethiweyo kwiitya zokubilisa eziphekiweyo, eziphekiweyo kunye ne-steamed, endaweni yokugcoba nokutshaya.
Ukuqinisekisa ukuba ukutya akuyi kuba ngumxinzelelo kumzimba, kufuneka uguqulwe ngokukhawuleza ekutya okungekho caloriki kunye noluncedo ngakumbi. Fumana indawo yaloo mveliso enobungozi, kodwa eyaziwayo. I-Stew okanye inyama eyosiweyo yenyama yenkukhu okanye intlanzi, i-ayisikrimu nge yogurt efriziwe, i-Coca-Cola yerusi yendalo okanye amanzi amaminerari, iipesele kwizithelo ezomileyo, i-mayonnaise kwisaladi ye yogurt yemvelo okanye ibhotela. Oku kuya kuba nempembelelo enokungabikho kuphela kumfanekiso, kodwa kwimpilo ngokubanzi.
Kwaye kubaluleke kakhulu, ukuba ulandela ukutya okanye cha, qho ukuphulaphula umzimba wakho. Ichanekile ngakumbi kunanoma yiphi na izondlo kunye neengcali zondlo ziza kukuxelela oko kukutya onokukwazi kwaye akunakudla ngexesha lokutya, xa kufuneka udle kunye nokuba le nto okanye loo mveliso isebenza njani emzimbeni.
Ukucamngca, umoya wokuphulukisa nokuphucula umzimba
Indlela yokupompa umva wakho ekhaya
Ukuzilolonga ngokomzimba kwimilenze emancinci
I-Phytodesign kuma-balconi kunye nemihlaba
I-asparagus edibeneyo kwi-sauce ebhalsamu
Ukhathala ngobudlelwane nomntu othandekayo, yintoni enokuyenza?
Ucoceko lomfazi kwisigamu sesibini sokukhulelwa
Unako ukususa amanqaku afana emva kokubeletha
Kuphi ukufumana umphefumlo wakho umlingane?